Madaxda dowlad Goboleedyada oo si aan la fileyn uga hadlay khilaafka Farmaajo iyo Rooble. | Warbaahinta Ayaamaha
Madaxda dowlad Goboleedyada oo si aan la fileyn uga hadlay khilaafka Farmaajo iyo Rooble.
MUQDISHO-AYAAMAHA-Madaxweynayaasha Shanta Dowlad Goboleedyada ayaa war saxaafadeed wadajir ka soo saaray xaalada siyaasadeed ee dalka, kaddib wada hadalo ay ku yeesheen khadka taleefanka.
Madaxda dowlad Goboleedyada ayaa si aan la fileyn uga hadlay khilaafka siyaasadeed ee Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha, iyagoo ku baaqay in wixii khilaaf ah lagu xaliyo tubta wada hadalka, lana ixtiraamo heshiisyadii doorasho ee horay u gaareen Madaxda dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada.
Sidoo kale waxay iclaamiyeen shir ay isugu imaanayaan Dowlad Goboleedyada 21-23 September magaalada Garowe.
7. Ugu dambeyn Madaxweynayaasha Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka waxay shir isugu imaanayaan Magaalada Garowe 21 – 23 September 2021 si ay uga arrinsadaan dardargelinta qabsoomidda doorashooyinka iyo guud ahaan xaaladda Dalka.